▷ Tefal Actifry 2 in 1 ▷ Oil Free Fryer Fikradaha iyo Qiimaha
Tefal ActiFry 2 gudaha 1
Ma waxaad raadineysaa a Shiilan saliid la'aan Tefal? Markaa waa inaad si dhab ah u tixgelisaa Actifry 2 in 1 sida ikhtiyaar wax iibsiga, maadaama ay leedahay dhowr sifooyin aad u fiican oo waxtar leh. Tefal waxa lagu gartaa in uu yahay astaan ​​leh alaabo tayo fiican leh oo loogu talagalay madbakhyadayada tanina waa mid ka mid ah Shiilanyada caafimaadka leh ee ugu caansan.
Fursadan waxaan lafaguri doonaa sifooyinka Tilmaamaha model this, ka dibna ee qiimaha iyo fikradaha ah kuwa hore u tijaabiyay, iyaga oo aan iloobin miiska isbarbardhigga. Waxaan bilownay!
Cusboonaysii: Moodeelkan Tefal Fryer-ka hadda lama iibin waayo waa la hagaajiyay waxaana lagu bedelay ActiFry Genius XL 2-in-1 shiilan aan saliid lahayn, oo leh tignoolajiyada horumarsan iyo barnaamijyo kala duwan oo lagu kariyo cunto badan:
Iibso Tefal Actifry 2 in 1
Eeg qiimaha hadda
➤ Astaamaha Sifada Tefal Actifry 2 in 1
➤ Tefal Actifry 2 1 qiimo ah
➤ Sidee buu u shaqeeyaa shiishka 2-in-1 Fryer?
➤ Fikradaha Tefal Actifry 2 in 1 Fryer
➤ Iibso Tefal 2 in 1 Fryer ah
Aynu si faahfaahsan u aragno waxa ay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan ee qalabkan iyo maxaa faa'iido ah hel isticmaalayaasha la sameeyay.
Awood weyn iyo laba Aag karinta
Fryer-kani waxa uu qaadaa ilaa 1.5 kiilo oo cunto ah, waana sababta uu ugu fiican yahay Qoysas aad u weyn. Astaantu waxay cadeyneysaa inaad u karin karto 6 qof laakiin fikradayada waa ku habboon 4 ama 5 xabbo ugu badnaan.
Tignoolajiyada 2-in-1 ee Patented
Intaa waxaa dheer, qaabkani wuxuu u taagan yahay laba aag cunto karinta, midba midka kale korkiisa, si aad u kariso laba cunto oo kala duwan isku mar oo aan dhadhanka isku darsan.
Tignoolajiyada shatiga leh ee Tefal sidoo kale waxay isku daraysaa hadda hawo heerkul sare leh oo daab wareeg ah taas oo meesha ka saaraysa cuntada. Sidan, a isku mid ah oo la kariyey ee suxuunta iyada oo aan loo baahnayn in lagu walaaqo gacanta sida qalabka kale ee tartanka.
1400 Watts oo Awood ah
Qaabkan Tefal waxa uu leeyahay awoodda ugu badan ee 1400 watts, oo la mid ah inta badan alaabta kale waana taas kugu filan inaad si fiican u kariso cuntadaada. Si kastaba ha ahaatee, suurtagal maaha in la habeeyo heerkulka oo leh heerkulbeeye, dhibic ka duwan tartankeeda.
Nadiifinta Degdega ah oo Fudud
Dhammaan shiilan saliid la'aan ah way ka nadiifsan yihiin marka loo eego kuwa caadiga ah sababtoo ah ma haystaan ​​dhibka saliidda saliidda, ama dhibaatada urta xun. Laakiin qaabkani waxa kale oo uu leeyahay a dahaarka dhoobada aan dhegta lahayn iyo qaybo ka mid ah (majarafadihii, daboolka iyo digsiga) waa la dhigi karaa makiinada weelka dhaqda si dhaqsiyo badan oo sahlan loo nadiifiyo.
Fryer-ka saliidda ee Tefal 2-in-1 wuxuu ku qalabaysan yahay a muuqaal LCD dijital ah, Taas oo ay suurtogal tahay in lala socdo wakhtiga ka hadhay cuntada ee labada qayboodba si ay u diyaar garoobaan.
Laakiin taas oo kaliya maaha, waxay sidoo kale ku jirtaa a smart time oo leh joogsi toos ah, si aad hawlo kale u qabato wakhtiga karinta. Wakhti yar oo jikada la joogo iyo wakhti badan oo qoyska la joogo!
Oo dhinac ma dhigi kartid Barnaamijyada cunto karinta 4 ku rakiban, kaas oo aad ku heli karto cunto macaan oo si fiican loo kariyey. Ugu dambeyntii, waxaa habboon in la muujiyo tignoolajiyadeeda Actifry, taas oo si siman u qaybiya saliidda, si cuntadaada si buuxda loogu kariyo si siman.
Naqshadeynta iyo Dhismaha
Habkani wuxuu leeyahay qaab wareegsan oo leh daboolka sare si aad cunto u hesho waxayna ka samaysan tahay balaastiig, laakiin taasi macnaheedu maaha inay joojinayso badeecada xoog leh oo waara. Waxay leedahay laba badhan xagga hoose kuwaas oo aad ku furi karto qaybaha shiilan.
Dhinaca kale, daboolku waa hufan yahay, taas oo faa'iido leh marka la karinayo sababtoo ah waad arki kartaa sida habka karinta uu uga dhacayo qaybta sare.
Shiiliyahani wuxuu leeyahay a cabbir aad u weyn Haddii aad haysatid jiko yar waa inaad xisaabta ku dartaa, maadaama ay wax badan ka xadi doonto haddii aad ka tagto miiska ama haddii aad go'aansato inaad ku kaydiso alaab guri.
Qiyaasta Cabbirrada: 49 x 38 x 30 cm
Qiyaastii Miisaanka: 6,4 Kgs
Midabada la heli karo: Madoow ama Caddaan
Badeecadani waxay leedahay 2 sano damaanad, ugu yar ee uu dejiyo sharciga Isbaanishka ee alaabada cusub. Sida qiimaha dheeriga ah, shiilan waxaa loogu talagalay inuu noqdo si fudud loo hagaajin karo haddii ay dhacdo burbur suurtagal ah iyo calaamadda waxaa ka go'an in ay dayactirto qaybo ka mid ah celcelis ahaan 10 sano ka soo iibsashada.
Qiimaha ayaa ah cilladda ugu weyn ee moodelkan, maadaama uu si rasmi ah uga sarreeyo 200 euro. Waa qiimo aad u sarreeya marka loo eego noocyada kale, inkastoo tefal waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan isticmaalayaashu. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxaa jira qiimo dhimis weyn oo aad iibsan kartaa ka hooseeya 200 euro.
Waqtiga qorista maqaalkan, farqiga qiimaha u dhexeeya caddaanka iyo madowga ayaa ahaa mid caan ah, kan labaadna wuxuu ahaa mid aad u jaban. Waad arki kartaa qiimaha hadda laga heli karo halkan:
Qalabka lagu daro
Kuwani waa qalabyada aad heli doonto marka lagu daro iibka.
Halkan waxaan kuugu dhaafi doonaa muuqaal gaaban oo aad ku arki doonto Fryer oo si buuxda u shaqeynaya karinta cunto karinta baalasha digaaga.
Milkiilayaasha moodalkan ayaa siiya socodka iyo Way ku qanacsan yihiin, maadaama Amazon leedahay a celceliska dhibcaha 4.2 ee 5. In ka yar in ka badan 50 boqolkiiba iibsadayaasha ayaa ku siinaya 5 estrellas badeecadan, halka 28% ay siinayaan 4 xiddigood. Waad awoodaa akhri dhammaan faallooyinka isticmaalayaasha halkan:
Summada Tefal waxay la soo baxday moodelkan: dhamaystiran, faa'iido u leh qoysaska aan ka badnayn 6 qof, awood ilaah iyo shaashad dhijitaal ah. Farsamadeeda 2-in-1, oo ay weheliso tignoolajiyadeeda Actifry, ayaa ah waxyaabo dheeri ah oo sameeya moodelkan Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan suuqa.
Laakiin dhammaan sifooyinkan ayaa ka muuqda qiimaha, taas oo ah mid aad u sareysa oo ka kooban faa'iidada ugu weyn ee alaabtan. Haddii qiimuhu aanu dhibaato ahayn, teknoolajiyada iyo natiijooyinka ay bixiso sida diyaarinta cuntada waa mid ka mid ah iibsiyada ugu fiican qalabka guriga ee noocaan ah.
4 barnaamijyada karinta ee hore
Tignoolajiyada 2-in-1 ee shatiga leh
Is barbar dhig Tefal Laba-in-One Fryer-ka Kulul si dhaqsi leh moodooyinka kale ee laba-heer ah ee suuqa:
Buuga cunto karintu kuma qorna Isbaanishka. Xagee ka heli karaa?: Haddii aad u soo dirto iimaylka Tefal boggooda, waxay kuugu soo diri doonan email qaab PDF ah.
Maxaad had iyo jeer u isticmaashaa majarafad? Si aanay cunto u gelin matoorka
Ma karin kartaa pizzas?: Kuma haboona biisa by majarafad
Miyuu la jaan qaadayaa xariijinta sncaks ee moodooyinka kale? Maahan wax la jaan qaadi karo
Ma tahay in suufka iyo saxanka sare ay wareegaan? Haa, labaduba waa inay wareegaan inta lagu jiro karinta
Intee in le'eg ayay baradhada qaadanaysaa? Waxay ku kala duwan tahay tirada iyo jarjar, laakiin ilaa 20 daqiiqo
Baradho noocee ah ayaad samayn kartaa? Waxaad samayn kartaa barafaysan ama dabiici ah
Ma samayn kartaa keeg? Ma samayn kartid noocyadan cuntooyinka
Ma samayn kartaa kalluunka? Haa, dusha sare ee saxanka si aanu u kala daadan
Ma jeclayd moodelkan oo ma kula tahay inuu ku habboon yahay baahiyahaaga? Waxaad ka iibsan kartaa online ka soo qaado badhankan:
Halkan ku iibso Qiimaha ugu Wanaagsan
Tignoolajiyada 2-in-1 ee shatiga leh iyo saxan cunto karinta caafimaad leh oo leh karti badan
2-in-1 guddi kontorool oo loogu talagalay karinta 2da goobood ee wax lagu karsado
Si fudud loo isticmaali karo 2-in-1 gacan. 2-in-1 qaado oo saliid iyo milix ah
Saacadaha Dijital ah iyo joogsiga tooska ah
Buug-tilmaameedka: waxaa ku jira Isbaanish; buug cunto karinta oo Jarmal ah
(Codadka: 10 Celcelis: 4.3)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Tefal » ActiFry 2 1aad